Tirinta cododka doorashada Madaxweynaha Somaliland oo socota
Tuesday November 14, 2017 - 13:17:40 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Waxaa socota tirinta cododkii shalay la dhiibtay ee doorashada Madaxweynaha Somaliland, iyadoo Guddiga doorashada uu soo bandhigi doono natiijada kama dmabeysta ee doorashada.
Qeybo ka mid ah gobolada Somaliland ayay ka socotaa tirinta cododka, gaar ahaan deegaanadii la dhigay sanaadiiqda cododka, waxaana la filayaa in degmooyinka qaar in maanta la soo gaba gabeeyo tirinta degmooyinka qaar.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Xisbiyada Kulmiye iyo Waddani ay labadaba codod badan heleen, inkastoo aan laga hor-dhici karin, waxaase muuqata in labadan xisbi ay ku kala horeeyaan deegaanada qaar.
In ka badan 700 kun oo codbixiyayaal ayaa codkooda ka dhiibtay ugu yaraan 1,600 oo xarumo codeyn, waxayna kala dooranayeen saddax musharrax oo doonaya in ay bedelaan madaxweynaha xilka baneynaya, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.
Degmo walba cododka uu Musharax walba ka helay ayaa maanta la shaacin doonaa, iyadoo Guddiga Doorashada ka digay in warbaahinta ka hor-dhacdo natiijo aan sax aheyn oo keenta qalalaase.
Somaliland ayaa sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale, waxaana aysan wali helin aqoonsi caalami ah.
Madaxweynaha oo Booqday Xarumo Caafimaad, Qalabna Gaarsiiyay Isbitaalka Madiina -Sawirro
15/06/2018 - 19:10:43